Tesalonikafo I 4 NA-TWI - Asetena a ɛsɔ Onyankopɔn ani - Bible Gateway
Tesalonikafo I 3Tesalonikafo I 5
Tesalonikafo I 4 Nkwa Asem (NA-TWI)
4 Anuanom, asɛm a etwa to ne sɛ, musuaa ɔkwan pa a ɛsɛ sɛ mofa so tena ase a ɛbɛsɔ Onyankopɔn ani. Na saa pɛpɛɛpɛ na morebɔ mo bra. Enti yɛde yɛn Awurade Yesu din srɛ, hyɛ mo sɛ, monyɛ mma ɛmmoro nea moreyɛ mprempren no mu. 2 Munim nkyerɛkyerɛ a ɛnam Awurade Yesu tumi nti, yetumi kyerɛkyerɛɛ mo. 3 Eyi yɛ Onyankopɔn pɛ a ɔwɔ ma mo. Ɔpɛ sɛ moyɛ kronkron na motwe mo ho fi aguamammɔ ho. 4 Ɛsɛ sɛ musua sɛnea mohyɛ mo ho so na obiara atumi ne ne yere atena kronnyɛ ne anuonyam so. 5 Monntena ase akɔnnɔ anibere so te sɛ wɔn a wonnim Onyankopɔn.